News - Page - 34
नेपालीहरुको संस्कृति र महान पर्वका रुपमा दशैलाई महत्वका साथ मनाइने गरिन्छ । तथापी नेपाली चलचित्रहरुमा दसैंले त्यस्तो महत्वपूर्ण स्थान पाउन सकेको छैन । जबकि यहि दसैंको अवसर पारी आफ्नो चलचित्र रिलिज गर्न निर्माता बिच घम्साघम्सी नै हुने गर्छ । चलचित्रमा प्रायः दसैंको बेला पारिवारीक सदस्यको विछोड
चलचित्र सृजना गर्दा गर्दै जीवनको अन्त्य होस् – अशोक शर्मा
डिसिएनमा काम गरिरहदा शर्माले नेपाली चलचित्रलाई नजिकबाट नियाल्ने अवसर पनि पाए । उनले पछिल्लो दशकमा चलचित्रमा आएका परिवर्तनलाई सुक्ष्म रुपमा औल्याए । चलचित्र कसरी अघि बढीरहेको छ, कस्तो शैली समातिरहेको छ, बजार के छ
जय भोलेलाई पनि मल्टिप्लेक्समा उच्च शो
चलचित्र जय भोलेले पनि मल्टिप्लेक्स हलहरुमा उच्च शो पाएको छ । असोज ३० गते फुलपातिको दिन देखी प्रदर्शनमा आउने चलचित्रले क्युएफएक्स चेनमा २४ शो
इन्टरनेशनल फिल्म फेष्टिवलमा ‘डाइङ क्यान्डल’ बाट सिर्जना सुव्वा उत्कृष्ट
चलचित्र ‘डाइङ क्यान्डल’ले ‘सिंगापुर साउथ एसियन इन्टरनेशनल फिल्म फेष्टिवल अवार्ड–२०१८’ मा दुई विधामा अवार्ड जितेको छ ।
चलचित्र प्रसादको दोस्रो गीत ‘बनकी चरी’ सार्वजनिक
चलचित्र प्रसादको दोस्रो गीत सार्वजनिक गरिएको छ । सार्वजनिक गरिएको ‘बनकी चरी’ बोलको गीत लोकलयमा आधारित रहेको छ ।
साथीको सम्झनामा बनाइएको गीत ‘आजदेखि साथी मैले’ सार्वजनिक
‘आजदेखि साथी मैले’ बोलको गीत सार्वजनिक गरिएको छ । सार्वजनिक गीतको भिडियो हेर्दै गर्दा कार्यक्रममा उपस्थित धेरैको आँखामा
ए मेरो हजुर ३ को पोष्टर सार्वजनिक, अनमोल र सुहानाको मुख्य भुमिका
दोस्रो पुस्ताका कलाकारहरुको मुख्य भुमिका रहने चलचित्र ए मेरो हजुर ३ को अफिसियल पोष्टर सार्वजनिक गरिएको छ ।
जात्राको सिक्वेल जात्रै जात्रा निर्माणको घोषणा
सन् २०१६ को सफल चलचित्र जात्राको सिक्वेल निर्माणको घोषणा गरिएको छ । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमका बिच जात्राको
सुधारिएको छक्का पञ्जा, सिरियस दिपक – दिपा !
दर्शकले त हिजो पनि उनीहरुका चलचित्र मन पराएकै थिए, आज पनि मन पराएका छन् । जसका कारण हरेक चलचित्रले सफल
चलचित्र प्रेम दिवसको शुभमुर्हत
चलचित्र प्रेम दिवसको शुभमुर्हत गरिएको छ । घटस्थापनाको अवसर पारेर राजधानीको मैतीदेवी मन्दिरमा सिनेमाको स्कृप्ट र क्ल्याप पुजा गर्दै शुभमुर्हत गरिएको हो ।
छक्का पन्जा ३ को आक्रामक ओपनिङ, चलचित्र हेर्न दर्शकको उच्च चाप
चलचित्र छक्का पन्जा ३ ले आक्रामक ओपनिङ गरेको छ । दशैंलाई लक्षित गरी आजबाट प्रदर्शनमा आएको चलचित्र छक्का पञ्जा ३
चलचित्र गुनगुनको ट्रेलर सार्वजनिक
चलचित्र गुनगुनको ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमका बिच चलचित्रको ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको हो । चलचित्रलाई पुकार भट्टराईले निर्देशन
नपत्याउनेले पनि पत्याउन थाले, अनि थपियो दिपकराज गिरीलाई चुनौति
चलचित्र छ एकान छ बनाए । स्टार भनिएका कलाकारका चलचित्र नै नचलेको अवस्थामा दिपकले आफ्नो चलचित्र के होला, कस्तो होला भनेर डर मान्नु स्वभाविक नै थियो । त्यसमाथी त्यो समय उनी केही नर्भस थिए, केही उत्साहित थिए, अनि धेरै आशाबादी थिए ।
चलचित्र कलाकार संघका अध्यक्ष रामकेशर बोगटीको निधन भएको छ । उनको ५८ बर्षको उमेरमा निधन भएको हो ।
चलचित्र बादशाह जुटको गीत सार्वजनिक
चलचित्र बादशाह जुटको गीत सार्वजनिक गरिएको छ । सोमबार राजधानीमा आयोजीत एक कार्यक्रमका बिच चलचित्रको गीत सार्वजनिक गरिएको हो ।
चलचित्र चङ्गा चेटको पोष्टर सार्वजनिक, चङ्गामै उडे कलाकार
चलचित्र चंङ्गा चेटको अफिसियल पोस्टर सार्वजनिक गरिएको छ । निर्देशक दिपेन्द्र के खनाल निर्देशित चलचित्रको पोष्टरमा
सिधा बोलेनन्, सिधा कुरा गर्ने रबी लामिछाने
टेलिभिजन कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगका प्रस्तोता हुन रवी लामिछाने । जुन कुनै विषयमा जो कोहीसँग सिधा कुरा गरेर चर्चामा आएका रवीले यसैसाता चलचित्र अनुराग हेरेका छन् । अर्का चर्चित पत्रकार ऋषी धमालाको निर्माण रहेको चलचित्र अनुराग हेर्न हलमा पुगेका रवीले यसपटक भने सिधा कुरा गरेनन् ।
सृष्टी महर्जन र रविन भुजेलको अभिनय रहेको पहिलो म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ ।
चलचित्र दैलोको ट्रेलर सार्वजनिक
चलचित्र दैलोको अफिसियल ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ । सुरेश उप्रेतीको निर्देशन रहेको चलचित्रको ट्रेलरमा सामाजिक दाइजो प्रथा र पारिवारिक प्रेमले मुख्य स्थान पाएको देखिन्छ ।
फ्राइडे रिलिज : चलचित्र निर्जला, रिलिजको पूर्व सन्ध्यामा च्यारिटी शो सम्पन्न
चलचित्र हेरिसकेपछि उपस्थित दर्शक तथा चलचित्रकर्मीहरुबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेको निर्माता न्यौपानेले जनाएका छन् ।
झण्डै ४ मिनेटको गीतले विषयको गहिराईमा सहजै पुर्याइदिन्छन् । दर्शकको ध्यान मात्र तान्दैनन् मन छोइदिन्छन् । अनि चलचित्रको कथा भनिदिन्छन् । यस्तै एउटा गीत हो चलचित्र प्रसादको लै... लै...
चलचित्र दि कर्माको गीत रिलिज
चलचित्र दि कर्माको गीत सार्वजनिक भएको छ । जवानीको बजार लाग्या छ... बोलको गीतको भिडियोमा अभिनेत्री नीता ढुंगानासँग नायक करण वर्माले नृत्य गरेका छन् ।
छक्का पञ्जा प्रमोशन गीत रिलिज, दिपक, दिपा, केदार र जीतुको र्‍याप
दशैको अवसर पारी घटस्थापनाको दिनबाट प्रदर्शन हुन लागेको चलचित्र छक्का पञ्जा ३ ले प्रमोशनल गीत सार्वजनिक गरेको छ ।
चलचित्र ड्रिम गर्लको ट्रेलर सार्वजनिक
चलचित्र ड्रिम गर्लको ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ । राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनका बिच चलचित्रको ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको हो । चलचित्र मंसिर ७ गते बाट प्रदर्शन
शारीरिक होइन, वैचारिक द्वन्द्व चाहिन्छ हिरो बन्न !
देश जुन विषयले रोइरहेको छ, अभिवावकहरु जुन विषयले पिरोलीरहेका छन्, नारीहरुले असुरक्षित महशुस गरिरहेका छन्, अनि नारीको इज्जत गर्न सिकेका पुरुषहरु पुरुष हुनुमै हिनताबोध गर्नु पर्ने बेला सृजना हुनै लागेको छ ।
निर्माता, निर्देशक, लेखक तथा गीतकार गगन विरहीको निधन, यस्तो छ उनको चलचित्र यात्रा
गम्भिररुपमा अस्वस्थ भई नर्भिक अस्पतालको सघन उपचार कक्षमा उपचाररत्
एकाएक आक्रोशित भए धमला, वितरक माथी धमलाको यस्तो हमला
धमला एकाएक आक्रोशित भए । उनको आक्रोश वितरक माथी थियो । उनले वितरकहरुले चलचित्र हलको राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न नसकेको गनुासो गरे । उनले नेपालमा बढी राजनीति वितरकले नै गर्ने गरेको आरोप समेत लगाए ।
चलचित्र निर्जलाको शिर्ष गीत रिलिज
चलचित्र निर्जलाको शिर्ष गीत रिलिज गरिएको छ । मेलिना राईको स्वर रहेको गीतमा गीतमा बाबुल गिरीको संगीत र राम रुवालीको शब्द रहेको छ । गीतलाई कमल राईले कोरियोग्राफी गरेका हुन ।
पहिले पहिले यसरी गरिन्थ्यो फोटोको काम । फ्रान्सबाट फोटो पठाउँदा राष्ट्राध्यक्ष गायब भएपछि हंगामा !
प्रबिधिको बिकाससँगै अहिले फोटोग्राफी तथा निकै सहज भएको छ । विश्वको जुनसुकै स्थानबाट जुन कुनै बेला सहजै रुपमा फोटोहरु
चलचित्र मालिकाको ट्रेलर सार्वजनिक, बालविवाह र महिला हिंसा बिरुद्धको आवाज
चलचित्र मालिकाको ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमका बिच
फ्राईडे रिलिज : छिरिङ्ग, अनुराग र कथा काठमाण्डुको
फ्राईडे रिलिज अन्तर्गत यो शुक्रबार तीन नेपाली चलचित्र प्रदर्शनमा आएका छन् । शुक्रबारबाट छिरिङ्ग, अनुराग र कथा काठमाण्डुको ले आफ्नो प्रदर्शन आरम्भ गरेका हुन ।
चलचित्र ‘नालापानी’ को टिजर सार्वजनिक, भिएफएक्सको अधिक प्रयोग
चलचित्र ‘नालापानी’ को टिजर सार्वजनिक भएको छ । बिहीवार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच टिजर सार्वजनिक गरेको हो ।
सर्यो ड्रिम गर्ल, अब मंसिर ७ मा आउने
चलचित्र ड्रिम गर्लले आफ्नो रिलिज पोष्टपोण्ड गरेको छ । झण्डै ३ महिना अघि अशोज १९ का लागि रिलिज डेट गय गरेको चलचित्रले रिलिजको एक हप्ता अघि प्रदर्शन मिति परिवर्तन गरेको हो ।
चलचित्रमा यौनजन्य दृष्य कलात्मक भन्दा अश्लिल ज्यादा !
भनिन्छ कामुकता दृष्यमा हैन दृष्टिमा हुन्छ । तर अपबादलाई छोडेर नेपाली चलचित्रको हकमा भने कामुकता दृष्टिमा भन्दा पनि दृष्यमै देख्नेहरु धेरै छन् । यति सम्मकी त्यस्ता दृष्यहरुलाई कलात्मक नभएर भल्गर वा अझ भन्ने हो भने अश्लिलताको बात लाग्ने गरेको छ ।
‘इण्टुमिण्टु लण्डनमा’ सफलताको केक काट्दै ‘आई एम ट्वान्टी वान’ निर्माणको घोषणा
चलचित्र इण्टुमिण्टु लण्डनमा निर्माण टिमले दोस्रो चलचित्र पनि निर्माण गर्ने भएको छ । बुधबार
काठमाडौं अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभल सुरु
काठमाडौं अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभल २०१८ सुरु भएको छ । मंगलबारबाट शुरु भएको फेस्टिभल चार दिन सम्म चल्नेछ । पर्यटन बोर्डको सभाहलमा जारी फेस्टिभलको उद्घघाटन
जय भोलेको अफिसियल पोष्टर सार्वजनिक, फुलपातिको दिनबाट प्रदर्शनमा आउने
चलचित्र जय भोलेको अफिसियल पोष्टर सार्वजनिक भएको छ । असोज ३० गते फुलपातिको दिनबाट प्रदर्शनमा आउने
चलचित्र ‘बादशाह जुट’को इण्डक्ल्याप, पौष १३ मा प्रदर्शन हुने
चलचित्र बादशाह जुटको छायाँकन सकिएको छ । ललितपुरको श्रीकाली चौरमा एक गीतको छायाँकनसँगै चलचित्रको इण्डक्ल्याप
चलचित्र लभ स्टेशनको मुर्हत, मुख्य भुमिकामा प्रदिप र जसिताको जोडी
उज्ज्वल घिमिरेको निर्देशनमा बन्ने चलचित्रको टिमले पशुपतिमा पुजा गर्दै मुर्हत गरेको छ । मुर्हतमा कलाकारहरु प्रदिप खड्का, जसिता
बलिउड अभिनेत्री जया पर्दा नेपाल सरकारको सद्भावना दुत
नेपाल सरकार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले भारतिय अभिनेत्री तथा पूर्वसाँसद जया पर्दालाई सद्भावना दुतका रुपमा
गीतलाई रिमेक गरेर चलचित्र छिरिङ्गमा समावेश गरिएको छ । रिमेक गरिएको गीतमा संगीपतकार यश कुमारले ओरिजिनल मेलोडीलाई मर्न दिएका छैनन् ।
इन्टु मिन्टु लण्डनमा : यो वर्षको सवैभन्दा उच्च व्यापार
चलचित्र ‘इन्टु मिन्टु लण्डनमा’ले यो वर्षकै सवैभन्दा उच्च ओपनिङ गरेको छ । शुक्रबार नै आक्रामक व्यापार गरेको चलचित्रले
चलचित्र ‘दि कर्मा’ को टिजर सार्वजनिक
चलचित्र ‘दि कर्मा’ को टिजर सार्वजनिक गरिएको छ । टिजरमा एकपात्रको एङग्री लुक्समात्र देखाइएको छ । चलचित्रमा भारतका मोडल तथा कलाकार करण वर्माको अभिनय रहेको छ
चलचित्र निर्जलाको दशैं गीत सार्वजनिक
चलचित्र निर्जलाको गीत सार्वजनिक गरिएको छ । दशैमा प्रदर्शन हुने भनिएको चलचित्र निर्जलाको दशैंसँग सम्वन्धित गीत यसपालीको दशैंमा... सार्वजनिक गरिएको हो ।
सोविताको ‘वराङ्गना’ सार्वजनिक
अभिनेत्री सोविता सिंखडाको पहिलो उपन्यास ‘वराङ्गना’ सार्वजनिक गरिएको छ । राजधानीमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा पुर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्द
घटस्थापनाको दिन छक्का पञ्जा ३, चलचित्रको ट्रेलर सार्वजनिक
चलचित्र छक्का पञ्जा ३ को ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ । राजधानीमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रमका बिच चलचित्रको ट्रेलर
नेपाल आइडलसँग प्रसादको सहकार्य
मंगलबार रिलिज गरिएको गीत बाट निकै चर्चा बटुलिरहेको चलचित्र प्रसाद चर्चित गायन रियालिटी शो नेपाल आइडलसँग जोडिएको छ । प्रसाद मुभि पाट्नरका रुपमा जोडिएको हो ।
राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीबाट झण्डै दुई दर्जन कलाकर्मीहरु बिभुषित हुने
झण्डै दुई दर्जन कलाकर्मीहरु बिभुषित हुने भएका छन् । राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीबाट संविधान दिवसको अवसर पारी असोज ३ गते विभिन्न क्षेत्रबाट राष्ट्रका लागि महत्वपूर्ण योगदान दिएका
Results 1762: You are at page 34 of 36